ish travels: Tilicho and Thorang: A Trek To Remember.
Tilicho and Thorang: A Trek To Remember.
क्याम्पस पढ्ने बेलामा प्रसस्त समय हुन्थ्यो तर घुम्नको लागि पैसा चैँ हुन्थेन जब काम गर्न थालियो पैसा हुने तर घुम्ने समय नहुने। कहिले बिदा पर्ला भनेर क्यालेन्डर हेरिरहनु पर्ने अनि ३/४ महिना अगाडि देखिनै योजना बुन्नु पर्ने। बुनेका योजनाहरु पनि धेरैजसो अन्तिम समयमा आएर कित स्थगित हुन्थे कित आर्को सुचना न आएसम्मको लागि थाती रहन्थे। धेरै योजना योजनामै सिमित हुन्थे।
घुम्न मन हुँदा हुँदै पनि खैरे हरु जस्तो काम परिवार छाडेर एक मैनै बिदा लिएर घुम्न निस्कन नि नसकिने एक दुई दिन फुटकर बिदा कुरेर बस्नु पर्ने। तनाब छ हजुर तनाब।
हाम्रो दशैँ Sep/Oct तिर पर्ने अनि हिमालतिर पदयात्रागर्नको लागि त्यो उनै उत्तम मौसम मानिने रै छ। एस्लाइ एक प्रकारको राम्रो सम्योग मान्नु पर्छ। हामिले लामो पदयात्रा जानको लागि पाइने बिदा भनेकै दशैं नै हो।
यसै कारणले गर्दा दशैँको मौसममा बाहय सङ्गस्ङ्गै आन्तरिक पदयात्रुको सख्यामा उल्लेख्य मात्रामा बृद्दी हुने बताँउछन पर्यटनकर्मिहरु।
दशैँको बिदा सदुपयोग गर्न टाइटानिक लेखेको माइक्रो बस चढेर दुई भाइ जनक र म, हिमाल पारिको जिल्ला मनाङमा अबस्थित बिश्वोको सर्बाधिक उचाइमा रहेको तिलिचो तालको यात्राकोलागि बिहानै नयाँ बसपार्कबाट लमजुङ्गको बेसिसहर हिँडेम। ५ घन्टाको माइक्रोबस यात्रा पछि बेसिसहर टेकेम। त्याँ पुग्ने बित्तिकै मनाङ् जाने जिप पाइएको कारणले गर्दा बेसिसहरमा खाना खान पाइएन तथापी केइ थान बिस्कुट चाउचाउ झोलामा हालेर अब जिप यात्रा सुरु गरियो। सामान्यत अरुबेला ८ जना चढाउने जिपमा त्यो बेला हामी २२ जना थियौँ अनि भाडा नि चौबर महङ्गो। गार्हो छ सर पेट्रोल पाँइदैन कि ब्ल्याकमा किन्नु पर्छ कि उतै नाकामा गएर महङ्गो मुल्यमा ल्याउनु पर्छ भन्दै थे ड्राइभर भाइहरु। कुरो जायज नै थियो। नाकाबन्दिको बेला कल्लाइ पो सहज थ्यो र? दशैँको बेला कोहि ससुराली हिँडेका थे कोइ मामाघर। हामी चैँ २ जना तिलिचो हान्निया थेम। हामी जस्तै ट्रेकिङ्ग हिँडेका चैँ ४ जना थिए त्यो जिपमा। उनिहरु चैँ हामी जस्तो झोले पारामा आएका थिएनन। पुरै बन्दोबस्तका साथ आएका ट्रेकिङ्ग जुत्ता लगाएका घाँटिमा चुच्चे केमरा भिरेका कालो चस्मा लगाएका नर्थ फेसको मोटो ज्याकेट लगाएका। उनिहरु होटेल मेनेजमेन्टका बिध्यार्थी रै छन। उनिहरु सङ्गको भलाकुसारिमा अन्नपुर्ण ट्रेकिङ्ग रुटको बारेमा नयाँ कुराहरु जानियो। र उनिहरु सँको जिप यात्रा रमाइलो भो भन्नू पर्छ। केटाहरु गाँजा भन्दा बाहेक केइ कुरा गर्थेनन। कता गाँजा पाइन्छ कता मीठो गाँजा पाइन्छ एस्तै एस्तै। मनाङ्गमा पर्पल हेज भन्नी गाँजा पाइन्छ भन्नी नि था पाइयो हा हा
महिन्द्राको जिप कुद्यो ढुङ्गै ढुङ्गाको पाहाड फोरेर बनाएको बाटोमा। कतै कतै डाकार र्यालिमा कार हरु कुदे जस्तरी धुलो उँडाउदै कुद्थ्यो त कतै कतै थानकोट को उकालोमा मालबाहक ट्रकहरु झैँ बिस्तारै कुद्थ्यो।
जिपमा बस्ने र उठ्ने यात्रुहरु बिच पालैपालो गरिन्थ्यो। बस्नेलाइ झन सास्ती थ्यो, एक छिन बस्न नपाँउदै गार्हो भो भन्दै बसेका नि उठिहाल्थे। मनमनै Pain In The Ass भनेको एहि होला भन्दाहुन। दिउँसो १२ बजेतिर जिपमा चढेका हामि राति ९ बजे मनाङको सदरमुकाम चामे पुगियो। डाइबर भाइले आज चामेनै बस्ने अनि भोलि बिहान सबेरै मनाङ पुग्ने कुरा गरे। हाम्रो अर्को टोलि त खुसी भएर जिपबाट झरे आज एतै थकाइ मारिन्छ पर्पल हेज तानिन्छ भन्दै। सोल्टिहरु सङ्गै ट्रेकिङ जाम्ला र अलि अलि गाँजा नि तानम्ला भन्ने सपना खेर गयो ह्याँनेर आर। ती सोल्टिहरु जाने बेलामा Annapurna Trekking Route को नक्सा दिएर गए जुन हामी झोले ट्रेकरलाइ धेरै नै काम लागो है।
एकै छिनमा त जिप खाली भो। तर हामि आज त्याँ बस्यो भने हाम्रो प्लानिङ्ग चौपट हुने कारणले डाइबर भाइलाइ मनाङ जानै कर गरेम। चामेमा चाउचाउको सुप खाइयो अनि चेल्सी र वेस्टह्याम युनाइटेडको गेम एक छिन हेरियो। जनक भन्दै थे मनाङमा आएर नि चेल्सी हारेको हेरियो।
डाइबर भाइहरुलाइ चिप्लो धेरै घसेसी अन्त्यत जिप मनाङ हिँड्यो। मैले चामेमा मगाएको चौँरिको सुकुटी एति चाम्रो रै छ कि जिप मनाङ पुग्ने बेला सम्म चपाइरा थे। एउटा कगजाँ पोको पारेर भोलिलाइ राखम भन्नी सोंच नआएको भने हैन।
हामी ३ घन्टाको जिप यात्रापछी मनाङ पुगियो। मनाङ पुग्ने बित्तिकै मलाइ लेक लागे झैँ पो भो, पुरै सन्सारै मेरो अगाडि घुम्न लाग्यो, मैले खुट्टा टेक्नै छाँडे आँखै देख्न छाँडे। मन्मनै बिचार आयो कति दुख गरेर बनाको प्लानिङ खेर गयो। भोलि नै काठमाडौ फर्किनु पर्ने भो। अपिसमा सबैलाइ तिलिचो जाने भनेर एक मैना अगिदेखी दिएको गफको पो मया लागेर आयो अचानक।
जनकले मलाएर समाएर होटेलमा लगे। होटेलमा गएर तातो पानी र चाउचाउ सुप खाएसि मलाइ बल्ल होस आयो अलि अलि आँखा देखे मैले। लु भोलि सबेरै यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनी पशुपतिनाथलाइ सम्झी सुतेँ।
बिहान ६ बजे उठियो। होटेलको झ्यालबाट देखिएको दृश्य ले मलाइ रामकृष्ण ढकालको बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस भन्ने गितको सम्झना दिलायो। एक्छिन मनाङ घुमियो। अलि माथी दोकानहरु नहुने र भए पनि अलि महको हुने कारणले केइ खानेकुराहरु, चकलेटहरु र ग्लुकोज किनेम। बोत्तलम पानी भरेम र ७ बजे बाट हाम्रो पदयात्रा सुरु गरेम।
हामी मनाङ्बाट तिलिचो ताल गएर फेरि मनाङ फर्केर त्यही जिप चढेर बेसिसहर फर्कने लक्ष्यका साथ हिँडेका थियौँ। पदयात्रामा हामी मात्रै थियनौ नाङ्गा पाखामा चरिरहेका नावर र हिमाली चराका बथान पनि थिए र साथै बाटोमा थुप्रै पर्यटकहरु भेट हुन्थे, पदयात्राको लागि उत्तम समय र बिश्वोमै चर्चित पदयात्रा रुट भएकोले गर्दा नि होला यो रुटमा पदयात्रुहरु सायदै कम हुन्छन। बाटोमा एक जना पर्यटक गाइड दाइ सित राम्रै दोस्ति भयो। उनी पनि तिलिचो हिँडेका रै छन उन्ले हाम्लाइ ह्याँ सम्म आइसकेसी तिलिचो बाट थोराङ पास गरेर मुक्तिनाथको दर्शन गरेर फर्कनुस भनेर सुझाब दे। के नै होला त भनेर हाम्रो सेडुल मा थोरङ्ग नि थपियो २ दिन लम्बिने भयो ट्रेक। हाम्रो यात्रा झन रोमान्चक हुने छाँटकाँट देखियो।
तिलिचो को पदयात्रा नेपालमा हुने पदयात्रा मध्य निकै गार्हो मानिनेरहेछ। कतै ठाडै उकालो चढ्नु पर्ने कतै गेग्र्यान बाटोमा ओरालो झर्नु पर्ने कतै एउटा सानो धर्सो जस्तो बाटो भएर जानू पर्ने। एसो गल्तिबस लडियो भने तल मर्स्ताङ्ग्दिको किनारमा पुगिने।
अन्नपूर्ण, मनास्लु, बिभिन्न हिमश्रृंखला र वरिपरिका नाङा पहाडहरु हेर्दै डरलाग्दो बाटो पन्छाउदै ४ बजे तिलिचो बेसक्याम्प (४२००मि) पुगियो। त्यो रात त्यँही बसियो। खाना खाइसकेपछी पर्यटकहरु सङ्ग बसेर बार्तालाप गर्न धेरै रमाइलो भयो। उनिहरु त जागिर छाडेर प्रेमिका च्यापेर २/३ मैनाको छुट्टी लिएर घुम्न आँउदा रै छन। आँफुलाइ जागिर छाडेनी कल्लाइ च्यापेर आउनिहो भन्नी समस्से हुन्छ। अनि आफ्नो देश गयो आर्को काम सुरु गर्यो अनि ४/५ मैना पछि फेरि घुम्न निस्क्यो। एक जना नेदरल्यान्डका पर्यटक भन्दै थे मेरो यो छैटौँ पटक हो नेपाल यात्रा। उनि पदयात्राकै लागि नेपाल आँउदा रहेछन। उनी भन्दै थे नेपाल धेरै सस्तो छ रे थोरै पैसामा धेरै ठाउँ घुम्न पाइन्छ रे। उनिहरुको लाइफस्टाइल सुन्दा कस्तो डाहा लाग्यो। हामी नेपाली चैँ मस्ती छ खैरे सोल्टिहरुलाइ भन्दै बसेम।
त्यो रात कस्टप्रद रुपमा बिताइयो, धेरै अल्टिच्युड धेरै जाडो भएर होला राती एक पलनी निदाउनै सकिएन। दाजु भाइ गफ गरेरै बसियो अधिकाम्स समय होटेल वाला लाई गाली नै गरियो एती धेरै पैसा तिर्दा नि एस्तो नराम्रो बिस्तारा अनि एस्तो नतात्ने सिरक दियो भनेर।
बिहान ६ बजे उठेर चिया मसरुम सुप खाएर तिलिचोको यात्रा सुरु गरियो। बाटो निकै कठिन भए पनि बिहानपखको जोसले सजिलै चढियो। फर्किदा पो था भयो लौ हामी एस्तो बाटो कसरी उक्लिइयो होला भनेर। ठ्याक्कै भन्नू पर्दा बाटो DNA को बनावट झैँ थियो जिग ज्याग, चित्रकार रोहिनी शर्माले लगाउनी टिको जस्तो। बेसक्याम्पबाट हिँडेको ३ घन्टामा, बिहान ९ बजे संसारकै उचाइमा रहेको ताल तिलिचो पुग्यौँ।
तिलिचो पुगेसी सबै थकान हट्यो। तिलिचो ताल वास्तवमै सुन्दर थियो। त्यसको सौन्दर्य वर्णन गर्न शब्द थिएन। म त खुसिले एक छिन सकि नसकी दौँडे। चित्रकारले कल्पना गरेर बनाएजस्तो निलो सफा ताल दायाँ बायाँ हिमालले घेरेको हाम्रो अगाडि थ्यो। एता काठमान्डु आएर फोटो देखाको हैट यो त फोटोशप हो समेत भने कोइ कोइले। मान्छे नै उँडाउने हावा चल्दो रहेछ त्यो कारणले पनि बिहान छिट्टै जानू पर्ने रहेछ। तिलिचोमा एक दुई थान फोटा खिचियो १०० रुपिया कपमा पाइने कालो चिया खाएर ओरलो झरियो।
बाटो ओरालो छिटै नै झरियो। बेसक्याम्पमा खाना खाएर त्यो दिन सिरिखर्क गएर बास बसियो। सिरिखर्कमा त्यो रात आनन्द सङ्गै बिताइयो। मीठो दाल भात राम्रो बिस्तारा राम्रो निन्द्रा भन्दा अरु केइ चाइया थेन।
बिहानि पख ७ बजे उठेर तातोपानि खाएर फेरि हाम्रो यात्रा सुरु गरियो। सिरिखर्क बाट मनाङ नभै थोराङ निस्कने बाटो लागियो भन्नू पर्दा अब कथाले नयाँ मोड लियो। त्यो रुटमा पदयात्रीहरु निकै कम हुँदा रहेछन। याकखर्क नपुग्दा सम्म बाटोमा कोइ पनि भेटिएनन। हामी दुइजना लखर लखर घरी ओकालो घरी त्यार्सो बाटो हिँडिराखेम। बाटोमा प्रसस्तै चौँरी गाई हरु भने देखिए। जानी राखम याक गोठहरु भएको कारणले त्यो ठाँउको नाम याकखर्क रहन गएको रैछ। खर्क भनेको गोठ हैछ।
७ घन्टाको लगातार हिँडाइपछी थोराङ फेदि पुगियो। भन्नू पर्दा फेदि पुग्न निकै नै गार्हो भयो। मैले त्यो बाटोमा हिँड्दा घरमा श्रीमति छोरा छोरिलाइ सम्झेँ। पछि फेरि बिचार गर्दा मेरो त बिहे नै भा छैन भन्नि था पाएँ, सकि नसकी फेरि हिँड्न थाले। फर्केर जाम कताहो कता उकालो चढम सकिन्न। कस्तो ठाम्मा आएर अल्झिइयो जस्तै लाग्यो एक छिन त। फेदिको होटेलमा पुगेसी त्यहांको माहोलले सबै कुरा बिर्साइद्यो एक झमटमा। त्यहाको होटेल ठमेलको कुनै ब्यस्त होटेलमा गए जस्तो। मेनुमा नपाइने कुरा केइ थेन पिजा देखि बर्गर सबै कुरा। खैरेहरु कोइ तास खेलिराथे कोइ चेस कोइ बिएर पिँउदै थे। पुरै मस्ती गरिराथे खैरे सोल्टिहरु।४०" को सोनिको LCD TV, ठूलो रेफृजेरेटर सबै अत्याधुनिक सामगृहरु। सबै सोलार बाट चल्दो रै छ।
त्यो रात एउटा सिरक ओछ्च्याएर ३ ओटा ओढेर सुतियो, अलकत्र खाएर मट्टितेलले कुल्ला गरे जस्तो।
बिहान ४ बजेको घन्टी लगाउन चैँ बिर्सेनम।
सँधै झैँ बिहान सुप खाएर बोत्तलमा तातो पानी भरेर यात्रा थालियो। बाटोमा लेक लागे खान हुन्छ भनेर लसुन झोलामा राखियो तर भाग्यबस त्यो लसुन कुनैपनी बेला खानु परेन। घरमा आएर राधिकाजिलाइ दिएँ त्यो लसुन मनाङ्गको कोसेली भन्दै।
बिहानै ४ बजे बाट लाइन हुँदो रहेछ थोराङ जाने हरुको। भरिया २०/२५ किलोका झोलाहरु बोकेर हामी भन्दा छिटो हिँड्दै थे। हामी भरिया दाइहरुको पछि लागेर उकाले चढेम। ४ घन्टाको लगातार उकालो हिँडाइपछी ८ बजे अन्नपूर्ण ट्रेक्किङ्ग रुटको क्लाइमेक्स विन्दु थोराङ भञ्ज्याङ पुगियो। त्यहाँ पुगेसी अलि अलि गर्बको महसुस हुने रै छ। पदयात्रुहरु त्याँ पुगेसी अनेक थरी गर्दा रै छन कसैले ज्याकेट खोलेर सेल्फी खिच्नी कसैले आफ्नो देशको झण्डा सङ्गै फोटो खिच्नी कसैले चुम्बन गर्ने एस्तै एस्तै। सानोतिनो सगरमाथा चढे झैँपो हुँदो रै छ। किनपनी नहोस ५४००मि माथी सकुसल पुग्नु भनेको चानेचुने कुरा होइनरहेछ। पहिलोपटक नेपाल घुम्न आएका एकजना फ्रान्सका पर्यटक भन्दै थे उनीहरू आफ्नो देशमा २१ सय मिटर अग्लो डाँडामा चढेका थिए । नेपाल आएर ५,४१६ मिटरमा चढेँ। बिश्वासै गर्न सकिराको छैन भन्दै थे। म नि अलि माथी गएर एउटा ढुङ्गामा "ish was here" लेखेँ।
८ बजे बाट ओरालो झर्न सुरु गरेको १:३० बजे मुक्तिनाथ पुगियो। ढुङ्गो गुल्ट्याइद्यो भने नि सिधै मुक्तिनाथै आउला जस्तो ओरालो बाटो थ्यो। ओरालो झर्न झन गारो हौ।
मुक्तिनाथको दर्शन गरि जिप चढेर जोमसोम आइयो। हामी एउटा पक्ष्मा भाग्यमानी ठहरेम किन भन्दा हामी मुक्तिनाथ पुग्दा बिस्तारै हिउँ पर्न सुरु हुँदै थ्यो। हामी माथिनै हुँदा हिउँ परेको भए हामी बाटोमै अड्किन्थेम। पछि मान्छेहरु भन्दै थे मास्तिर त मज्जाले हिउँ परेको छ।
जोमसोमबाट फेरि आर्को गाडी चढेर घाँसा गयौ र त्यो रात घाँसामै बस्यौँ। टिम्बुर हालेको चाउचाउको सुप खाँदा खाँदा वाक्क भैसकेको अनि मासु पनि खान नपाएकोले जिन्दगी हल्का बोरिङ हुन्दै गएको अबस्थामा घाँसा आएर धेरै दिन पछि मीठो मासु भात खान पाउँदा सन्सारै जिते झैँ नभाको हैन। एसो बिचार गर्दा बेनिबाट सिधै मुक्तिनाथ र मुक्तिनाथ बाट सिधै बेनिसम्मको सार्बजनिक यातायात हुने हो भने त तिर्थयात्रु तथा छोटो समय लिएर पदयात्र गर्न निस्केकालाइ धेरै सजिलो हुन्थ्यो। यातायातको सिन्डिकेसनले गर्दा धेरै नै झेमेला हुने रै छ त्यो एरियामा। गाडिहरुलेनि मनलागी गर्ने। मुक्तिनाथ जान बेनिबाट घाँसा सम्म एउटा गाडी घाँसाबाट जोम्सोम सम्म अर्को अनि फेरि जोम्सोमबाट मुक्तिनाथ सम्म आर्को। निकै गार्होपो रै छ हौ।
बिहानै घाँसाबाट बेनिको लागि बस चढेम। बाटोमा गाडी बिग्रेर ३ घन्टा जति रोक्किनु पर्यो त्यस्को प्रत्यक्ष फाइदा हामिले म्याग्दिको रुप्से झरना र सन्सारको सबैभन्दा गहिरो गल्छी कालिगण्डकिको गल्छी घुमेर लिएम। रमाइला दृश्यहरु क्यामरामा कैद गर्यौँ। बेसिसहर बाट छिरेका हामी छैटौँ दिन तिलिचो ताल र थोराङ्ला पास गरेर बेनि बजार निस्क्यौँ।
४ बजे बेनिबाट अन्तिम बस पोखराको लागि छुट्यो। सामान्यत ३ घन्टा लाग्ने बेनि पोखराको बाटो ५ घन्टा लगाइदियो।फेरि नाकाबन्दिनै मुख्य कारण बन्यो। पोखरा पुग्दा ९ बज्यो। भोलि पल्ट जसरी पनि कार्यालय हाँजिर गर्ने पर्ने भएकोले पोखरा नबस्ने जसरी भए पनि काठमाडौ जाने निर्णय भा थ्यो। मुढामा बसेर पोखरा बाट काठमान्डू सम्मको नाइट गाडिको यात्रा तय गरियो।
ट्राभलसम्बन्धी अमेरिकी वेवसाइट रफगाइड्सले सन् २०१६ मा घुम्नै पर्ने मुलुकको सूचिमा नेपाललाई पहिलो सूचिमा राखेको छ। छुट्टी मिलाउनुस। साथी खोज्नुस घुम्न निस्किहाल्नुस। साथी नभेटे एक्लै निस्किनुस। बिज्ञहरु भन्छन हाम्रो नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँ घुम्न हिँड्नुअघि धेरै सोचिरहनु आवश्यक छैन । निकै छोटा दूरीमै भेटिन्छन् रमाइला र मनमोहक गन्तब्यहरु।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणले जिवनमा एक्पटक पुग्नै पर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० गन्तव्यमा राखेका अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग त झन छुटाँउदै नछुटाउनुस है।
Posted by #ishpeaks at 9:36 AM
Labels: #adventure, #Annapurna, #mountains, #nepal, #thorang, #tilicho, #tilichotrek, #trekking